Ukuba upheka amaqanda ekushiseni okuphezulu, iprotheni iya kuqina, kwaye i-yolk idibene. Ngokupheka okucothayo - ngokuchaseneyo.
Utywala ubhake bhetele, ukuba ujikeleze i-pie ukushiya ukungabi nalutho.
Ukuba ugqiba ukupheka iintlanzi zaselwandle, sincoma ukuba sinciphise emanzini abandayo kwaye ungeze izaqathe, i-anyanisi, iqabunga le-bay.
Ukuba ioli yemifino iba yinto efufayo, uthele ityuwa (1t isipuni nge-1 ilitha yeoli), maye wema iintsuku eziyi-3-4, uze uyisigxina kwisinye isidlo ngaphandle kokugubha.
Kwi-aluminium izitya awukwazi ukugcina ubisi obuninzi obuninzi, iintlanzi zetyuwa, izitya ezivela kwiitatata kunye neetamatati kwaye ngokuqhelekileyo awukwazi ukugcina isisombululo esityubileyo okanye iviniga, ngenxa yokuba ngaphantsi kwefuthe le-alkali kunye ne-acids, i-aluminium iyatshatyalaliswa.
Xa ukhetha ukhukhamba, kongeza i-mustard encane eyomileyo kwi-brine - ukhukhamba iya kugcinwa ixesha elide.
Emva kokulungiselela i-sauce ye-fry, faka icawa yeoli kwifoloko uze uchithe yonke indawo yesuphu eshushu. Ukukhwa kweoli (ifilimu) ayiyi kuvumela i-sauce ukuba iyomile ixesha elide. I-ukhilimu omuncu, eyongezwa kwi-sauce, ayiyi kuhlala phantsi xa ixutywe nobisi oluncinane kwangaphambili.
Ukuba uceba ukucima i-omelet, ugxobise epanini yokupanda kunye neforko ukusuka emacaleni ukuya phakathi-ngoko kuya kuvela ngokugqithiseleyo.
Ubunzima obunzima buya kuphinda bube buhlungu, ukuba zifakwe ngokufutshane kwi-oven. Ukongezelela, unokwenza umququzelele i-friji kwifriji, kwaye emva kokutya, ufudume kuhovini.
Ukuthintela irayisi ekutshiseni ngexesha lokupheka, akudingeki ukuba ivuselelwe. Gubungula izitya apho okuphekwe khona.
I-Beetroot ayilahlekelwa ngumbala wayo, kwaye amazambane awamnyama, ukuba ungeze iviniga encinane ngexesha lokupheka.
Ubisi abuyitshisi xa kubiliswa kwisitya esinezantsi, emva kokuhlambulula ngamanzi abandayo.
Iifatata zifakwe epanini kwaye zithululelwa ngamanzi abilayo kumgangatho ongaphezulu kwe-1 cm ngaphezulu kwezilimo eziyizigaxa. Khumbula, ngaphezu kwamanzi awuthululelayo, izondlo ezininzi ziya kutshatyalaliswa.
Iibhontshisi eziphekiweyo ziya kuba zininzi kwaye zizonambitheka xa ziphekwe kwi-peel, ngaphandle kokucoca iingcambu kunye neendawo zokuhlala.
Ukugcina umbala we-beet xa upheka, faka kwisipuni seshukela okanye iviniga encinane.
Ukususela kwindawo yokujonga i-vitamin supply, imifuno eluhlaza kunye neziqhamo zibaluleke kakhulu.
Ukugcina i-vitamin C, isipinashi kufuneka iphekwe imizuzu eyi-10 kuphela, kunye neetamatati - 5.
Iifatata, iibhotile, i-karoti, ii-apulo kufuneka zihlambuluke njengezincinci kangangoko kunokwenzeka - phantsi kwesikhumba samavithamini. Kucetyiswa ukuba uhlambulule kwaye usike imifuno enomsila wensimbi engenasici.
Ukuhlanjululwa kunye nemifuno ekhethiweyo akufanele ixoke: kufuneka ifakwe ngokukhawuleza embhodweni apho isidlo sitshatyalaliswa khona, okanye sinikwe etafuleni xa ulungiselela isaladi.
Imifuno yesaladi imele iphekwe kwinqanaba lokugcina iivithamini. Musa ukuwapheka kwisitya esinye, njengoko belahlekelwa ngumdla kunye nombala.
Iklabishi yokutya, ethathwe kwi-brine, kufuneka isetyenziswe ngokukhawuleza ukutya.
Ikholeji, kunye neklabishi enomuncu kakhulu, kungcono ukuba ungayihlamba, njengokuba iivithamini kunye ne-microelements zilahlekile. Ngaphambi kokupheka, yifake, yongeza ushukela okanye iklabishi entsha ukuze uzonambitha. Kwi-brine sauerkraut ininzi i-vitamin C njengoko iklabishi ngokwayo.
Ukugcinwa kwezinto zasehlobo nasebusika
Imithetho yegolide enokukunceda ebomini
Indlela yokwenza i-grey amehlo
Itheyibhile yokuzonwabisa kubafazi abakhulelweyo
I-romance romance emsebenzini
Indlela yokuhlangana nomfana esikolweni
Iindlela zokupheka ezithandekayo kakhulu
Indlela yokuzisa umntu ukuba ajabule